Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Caawa Oo Isniin Ah Qoreen Wargeysyada Yurub
Monday January 20, 2020 - 22:29:59 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee bisha Janaayo ayaa furan iyadoo kooxaha ay baadigoob ugu jiraan xiddigihii
ay isku sii adkeyn lahaayeen qeybta labaad ee xilli ciyaareedka.
RASMI: Real Madrid ayaa dhameystirtay saxiixa xiddiga reer Brazil ee ay kooxaha Yurub ugu waa weyn doonayaan Rienier kaasoo ay 30 milyan euro uga soo iibsadeen kooxda reer Brazil ee Flamengo.
18 jirkaan khadka dhexe ayaa u saxiixay Los Blancos qandaraas lix sannadood ah, waxa uu ku biirayaa xiddigaha da’da yar ee Brazil ee ay Real Madrid soo iibsatay sida Rydrygo iyo Vinicius Jr.
Atletico Madrid iyo Manchester United ayaa tartan kala kulmaya saxiixa weeraryahanka Paris Saint-Germain Edinson Cavani ka dib markii tababaraha Chelsea Frank Lampard uu shirkiisa jaraa’id ee maanta uu ku sheegay inay xiiseynayaan ciyaaryahanka.
Cavani ayaa qandaraaskiisa uu dhacayaa xagaaga soo socda laakiin waxa uu doonayaa inuu baxo bishaan Janaayo isagoo durbaba ka codsaday PSG inay iska iibiyaan sida uu xaqiijiyay agaasimaha kooxda Leonardo.
Pedro Brazao ayaa ah xiddigii ugu danbeeyay ee da’ yar ah ee ku tartamayaan kooxaha ugu waa weyn Yurub.
Xiddiga reer Portugal oo kulankiisii ugu horeysay isbuucaan u saftay kooxda Faransiiska ee Nice ayaa waxaa doonaya Liverpool, Paris Saint-Germain, Bayern Munich iyo Sporting Lisbon, sida ay qortay jariirada Daily Mail.
Agaasimaha kooxda Paris Saint-Germain Leonardo ayaa si adag u beeniyay in Kurzawa uu ka tagayo kooxda bisha Janaayo.
"Wax dalab ah marnaba uma aanan helin Kurzwa waa zero. Waxa uu ciyaaraa kulamo badan. Waa ciyaaryahan haatan saxiixay qandaraas cusub, laakiin waxba ma aanan maqlin. Arsenal marnaba nama soo wicin” ayuu yiri.
France Football ayaa isbuucii hore sheegtay in Arsenal ay heshiis shaqsi ah la gaartay daafaca bidix.
arcelona iyo Juventus ayaa lala xiriiriyay inay is dhaafsanayaan Ivan Rakitic iyo Federico Bernardeschi, laakiin waxa ay u muuqataa in labada kooxood ay kawada hadlayaan inay isdhaafsadaan labo xiddig oo da’ yar ah.
Juventus waxa ay dooneysaa xiddiga Barcelona Marquis halka ay diyaar u tahay inay dhanka Barcelona u fasaxdo Matheus Pereira, sida ay qortay jariirada Marca.
Xiddiga diirada u saaran Manchester City ee Lauturo Martinez ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kooxdiisa Inter Milan isagoo ka jawaab celinayay wararka la xiriira mustaqbalkiisa.
Xiddiga reer Argentina waxaa sidoo kale lala xiriirinayay kooxda Barcelona.
Kooxda Liverpool ayaa diiday inay u ogolaato xiddigeeda khadka dhexe Xherdan Shaqiri inuu ku biiro kooxda Talyaaniga ee AS Roma. Shaqiri ayaan boos joogta ah ka heysan Liverpool, wuxuuna tartan weyn ugu jiraa xitaa xiddigaha keydka sida ay sheegtay Sky Sports.
Inter Milan ayaa haatan diyaar la ah inay bixiso 11 milyan ginni oo lagu daray labo lacageed oo abaalmarino ah si ay Totteham uga soo wareegaan xiddiga khadka dhexe Christian Eriksen bishaa Janaayo sida ay sheegtay Sky Sport Italia.
Wakiilka xiddiga reer Denmark oo lagu magacaabi Martin Schoots ayaa la kulmi doona gudoomiyaha Spurs Daniel Levy Talaadada si ay uga wada hadlaan xaalada ciyaaryahanka.
Manchester United awood uma lahan inay Alexis Sanchez ka soo ceshato Inter Milan oo ay ku daboosha xiddiga ka dhaawacmay ee Marcus Rashford sababtoo ah sharuudaas laguma darin qandaraaskii amaahda ee uu ku baxay Sanchez.
Waxay taasi la micno tahay in xiddiga reer Chile aan lagu soo celin karin Old Trafford bishaan Jnaayo iyadoo kooxda ay raadineyso weeraryahan cusub ka dib dhaawacii soo gaaray Marcus Rashford